ရုရှားငွေကြေး | ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပို့ကုန်များအတွက်နိုင်ငံခြားငွေကြေးဝယ်ဖို့ဆွီဒင် currency.net တစ်ဦးကလမ်းညွှန်
နေအိမ် ရုရှားငွေကြေး RSS
အဆိုပါရူဘယ်ရုရှားပိုက်ဆံ၏ငွေကြေးဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသိအမှတ်ပြုကြသည်နှစ်ခုကိုအဖွဲ့ချုပ်နေသောတောင်ပိုင်း Ossetia နဲ့ Abkhazia ၏ငွေကြေးအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်. သူတို့နောက်ဆုံးမှာတက်ဖဲ့ရှေ့တော်၌ထိုရူဘယ်ယခင်ကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်ရုရှားအင်ပါယာ၏ငွေကြေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့. ဘယ်လာရုစ်၏နိုင်ငံလည်းနာမည်တူ၏ငွေကြေးရှိပါတယ်. 100 kopeks လုပ် 1 ရူဘယ်. ရုရှားငွေကြေးကိုတရားဝင်အသုံးပြုသည်ဆိုသင်္ကေတရှိသည်ပါဘူး, သော်လည်း “py6” အသုံးများကြောင်းအတိုကောက်စာလုံးဖြစ်ပါတယ်. အမျိုးမျိုးသောသင်္ကေတများတရားဝင်သင်္ကေတအပေါ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ယခု၏အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိသည်.
စကားလုံး “ရူဘယ်” ထိုစကားလုံးမှဆင်းသက်လာသည် “rubit” သောနည်းလမ်းများ “ဖြတ်ဖို့”. အစောပိုင်းကာလ၌, ရူဘယ်တကယ်တော့တစ်သည့်ဒင်္ငွေကြေးမဟုတ်ခဲ့; အစားကတန်ဖိုးနှင့်အလေးချိန်တစ်တိုင်းတာခဲ့သည်. kopeks ထက်အခြား, အရူဘယ်ကိုလည်း altyn သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် (3 kopecks), အ grivennik (10 kopecks), အ polupoltina (25 kopecks), နှင့် poltina (50 kopecks). ဒါဟာနှစျတှငျခဲ့ 1704 ရုရှားအစိုးရရုရှားငွေကြေးအဖြစ်ငွေကိုရူဘယ်ထုတ်ပေးရန်စတင်ခဲ့ကြောင်း. 1 ရူဘယ်ကနဦးမှာတန်ဖိုးထားခဲ့ 28 ငွေအဒါပေမယ့်အဲဒါကို devalued အ 1760 ရဲ့ gm 18 ငွေအ gm. ထိုအနှစ်အကြား 1756 နှင့် 1779, ကိုရွှေဒင်္ဂါးပြားထုတ်ပေးနှင့်အနှစ်တို့အကြားခဲ့သည် 1770 နှင့် 1771, ကြေးနီဒင်္ဂါးပြားထုတ်ပေးခဲ့. Assignatsii, သောစက္ကူကတိမှတ်စုအ years1769 အကြားထုတ်ပေးခဲ့ကြပြီး 1849.
ရုရှားငွေကြေးကိုအခြားငွေကြေးများတစ်အရေအတွက်တန်ဖိုးဆွေမျိုး၌ကြီးစွာသောကျဆင်းမှုခံခဲ့သည်. တကယ်တော့, သြဂုတ်လနှင့်စက်တင်ဘာလစောစောပိုင်း၏အဆုံးဆီသို့ဦးတည် 2014, ဒါကြောင့်စံချိန်မကြုံဘူးထိမိ.
အဆိုပါရုရှားအဖြစ်ကောင်းစွာစီးပွားရေးစီးပွားပျက်ကပ်ကနေခံစားနေရပြီးနေကြတယ်. သို့သော်, လူများ devalued ရုရှားငွေကြေးနှင့်ဆက်စပ်နေသောပြဿနာများ၏ကောငျးစှာသိရှိထား. အဆိုပါရူဘယ်ရဲ့တန်ဖိုးတစ်ဒေါ်လာနှင့်ယူရိုငွေ၏ဆန့်ကျင်တောင်မှအနိမ့်ဆုံးကြမှခွင့်ပြုထားပါတယ်. ရုရှားစီးပွားရေးကိုရေနံမှအကြီးအကျယ်ချည်ထားသောကြောင့်ဒီခွင့်ပြုခဲ့သည်, ရေနံနှင့်မှာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက $49 သူတို့နာကျင်နေကြတယ်တစ်စည်. ငါရုရှားနိုင်ငံအကြောင်းဖြစ်ဆီလိုတစ်နေရာရာမှာဖတ် $70.00 သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့အလို့ငှာစည်​​နှုန်း